Sawirro: Horumarka ka muuqda garoonka Aadan Adde Airport ee magaalada Muqdisho + Warbixin | Caasimada Online
Home Warar Sawirro: Horumarka ka muuqda garoonka Aadan Adde Airport ee magaalada Muqdisho +...
Sawirro: Horumarka ka muuqda garoonka Aadan Adde Airport ee magaalada Muqdisho + Warbixin
Muqdisho (Caasimada Online) – In ka yar sanad ka hor, garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle ee magaalasada Muqdisho wuxuu ahaa meel ciriiri badan, isku dhex yaacsan oo leh hal meel oo laga soo dago iyo hal meel oo laga dhoofo waxaase intaa u dheeraa kuleyl daran iyo mugdi.
Maanta garoonka Aadan Cabdulle waa garoon caalami ah meel wanaagsanna uga jira garoomada wadamada Africa, weyn oo ku filan dadka isticmaala. Wuxuu leeyahay laba qeybood oo u kala qeybsan duulimaadyada gudaha iyo kuwa caalamiga ah, Labada qeyboodba waxaa ku yaala Kafateeriya casri ah oo raaxo leh bilicdiiduna ay soo jiidanayso indhaha dadka isticmaala, guud ahaanna waxaa kor loo qaaday, la hufay, lana casriyeeyay adeegyada gudaha garoonka.
Laakiin in ay intaasi hirgasho ma ahayn howl fudud waxaa yiri Mustafa Durgut oo ah madaxa suuq geynta iyo xiriirka bulshada ee shirkadda Fevori oo dhistay maamushana garoonka cusub ee noqday astaanta horumarka Muqdisho.
“Laba sano ka hor markaanu nimi halkan, garoonkani wuxuu ahaa dhisme yar oo aad ciriir u ah, waanay adkayd in lagu shaqeeyo. Waxaanu markiiba u tafaxaydaney kuna dadaalnay inaan dhisno garoonkan quruxda badan oo hadda noqday wajiga Soomaaliya” ayuu ku yiri Mustafa Durgut.
Fevori ma ay dhisin oo kaliya garoonka ee waxa ay kor u qaaday tayada adeegyada duulimaadyada iyadoo riyadeeda iyo rajadeeeduba yihiin inay Muqdisho noqoto xarunta duulimaadyada Bariga Africa ay isaga gooshaan si ganacsiga iyo dhaqaaluhuba kor ugu koco.
“Garoonkani waa wajiga Soomaaliya waa albaabkii Soomaaliya laga soo galayay, marka qof aan hore u iman uu yimaado, waxa ugu horeeya ee uu arkayaa waa garoonkan cusub, ma aha Fevori ee waa Soomaaliya. Dadkuna marka ay arkaan garoonkan casriga ah wey aaminayaan Soomaaliya waxaana ay arkayaan in Soomaaliya tahay wadan la maal galin karo, ganacsina lala samayn karo” ayuu yiri Durgut.
Fevori waxay heshiis kula gashay dowlada Soomaaliya 2013 inay maamusho Garoonka magaalada Muqdisho, heshiiska waxaa ka mid ahayd in Fevori dhisto terminal cusub oo heer caalami ah, waxaa kaloo heshiiska ku jirtay in Fevori hore u mariso garoonka si loo helo adeegyo hufan oo la jaan qaadi kara aduunka.
Waxaanu dhamaynay wajigii koowaad ee mashruucan oo ahaa dhismaha terminalka iyo xarunta maaraynta xamuulka, wajiga labaadna waa dayac tirka iyo balaarinta wadada diyaarada si loo kordhiyo diyaaradaha kusoo dagi kara garoonka, ayuu yiri Durgut.
Durgut wuxuu kaloo yiri “Terminalka iyo qeybta xamuulkuba imika diyaar bay u yihiin maaraynta iyo qaabilaada duulimaad yada habeeenimo, oo ay socoto howshii nal galinta wadada diyaarada, waxaa kaloo terminalku u baahan yahay meel baabuurta la dhigto si loo fududeeyo loona tayeeyo joogida dadka rakaabka ah.”
Si loo gaaro heer caalami ah, Durugut wuxuu yiri waxaan wada hadal kula jirnaa hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan duulimaadyada ICAO oo bixisa shahaadada tayada garoomada caalamka, si ay garoonka Aadan cabdulle ugu fududaato inuu la tartamo garoomada aduunka.
Habka jaridda tigidhada iyo rarida diyaaradaha oo ah mid cusub oo casriyaysan ayaa fududeeyay shaqooyinka shirkadaha duulimaadyada taas oo macneheedu noqonayo inuu hoos u dhacayo sicirka duulimaadka maadaama shirkaduhu heleen adeeg hufan oo raqiis ah.
Marka laga soo tago horumarka la sameeyay sanadkii tagay, rakaabka iyo dadka imanaya garoonka ayaa caqabad kala kulma soo galida garoonka iyagoo la mariyo baaritaan xoogle oo mar mar shaqada ku keena culeys, waxaa iyaduna xusid mudan in qalabka ay Fevori u isticmaasho garoonka oo inta badan laga keeno dibadda, ay soo gudbinta iyo fasax ka qaadashada ciidamada AMISOM iyaduna gaabis u keento shaqada socota, intaas oo is biirsatay waxay dhib ku tahay horumarka. Hase ahaatee waan ognahay aragnaana muhiimada ammaan ee arintani leedahay waxaanan rajaynaynaa inaanu ka gudbi doonno, ayuu yiri Durgut.
Garoonka cusub ee Aadan Cabdulle oo ay wada fureen madaxweynaha Jamhuuriyada federalka ee Soomaalia Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Turkiga Rejeb Tayyib Ordogan sanadkan bilowgiisii, ayaa soo jiitay shirkado duulimaad oo badan safka horena ay uga jirto Turkish Airways oo maalin walba timaada Muqdisho, waxaa kale oo jira shirkado kale oo mardhow duulimaadyo caalami ah ka bilaabi doona garoonka Aadan Cabdulle ee magaalada Muqdisho.